Qaabka aan u shaqayno - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
90% shaqaalaha MSF ee dunida oo dhan waxaa laga qortey degaannada dalalka ay MSF ka shaqeyso. Inta soo hartey ee ah 10% waa shaqaale caalami ah. Waayo-aragnimada shaqaalaha caalamiga ah iyo kuwa degaannada oo la isu geeyey ayaa MSF awood u siineysa in ay daryeel caafimaad siiso dadka ugu baahi badan. Haseyeeshee waxaa jira, goobo tiradoodu kooban tahay oo ay adag tahay in shaqaalaha caalamiga ahi ay ka shaqeeyaan. Xaaladaha noocaas ah, ayaa waxaa barnaamijyadeenna sii wada oo mahaddeeda leh shaqaalaheenna degaanka ee dadaalka badan, oo ay si hoose u taageeraan koox maareynta u qaabilsan oo dibadda ka joogta.
Shaqaalaha MSF waxa ay safka hore kaga jiraan daryeelka caafimaad ee degdegga ah ee la siiyo dadka u baahan. Daryeelka caafimaadka aasaasiga ah ee ay siiso dadka la silcaya cudurada soo noqdoqda iyo kuwa la dayacay ka sokoow, MSF waxa ay sidoo kale bixisaa qalliin, waxa ay dayactirtaa cusbitaallada iyo xarumaha caafimaadka, fulisaa barnaamijyo nafaqeyn iyo kuwa fayadhowr, tababartaa shaqaalaha caafimaadka ee degaanka waxaana ay bixisaa daryeelka caafimaadka dhimirka.
MSF waxa ay ku dadaaleysaa in ay bixiso daryeelka caafimaadka ee ugu wanaagsan ee suurtagalka ah. Si tan loo xaqiijiyo, waxa aan u baahannahay in aan si furan u gaari karno dadka u baahan gargaarka, si loo daraaseeyo xaaladda loona bixiyo gargaarka loo baahan yahay. Waxa aan ku tiirsannahay xiriir wanaagsan oo aan bulshada la yeelano iyo xiriir ku dhisan is-ixtiraamid oo aan la yeelano dhammaan kooxaha ugu muhiimsan ee degaanka ka jira si aan u ilaashanno u madax-bannaanaanta hawlaheenna caafimaad – oo ay ku soo hoos galaan shaqaalaheenna caafimaadka, dhismayaasha iyo sahayda. Si loo hubiyo in gargaarka MSF la siiyo kuwa ugu baahida badan, ayaa MSF waxa ay ku adkeysaneysaa in ay si toos ah ugu lug lahaato kormeerka iyo maareynta barnaamijyadeenna caafimaadka. Sidaa daraaddeed, hawlaheenna ma fuliyaan ururo nala hawlgala.